Iphupha le-Foundry Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Ukulahla yinkqubo yokhetho kwimidlalo eyahlukeneyo yobugcisa kunye nemveliso. Abadlali, iimodeli, iimvumi, bonke kufuneka bazazise kwabo banoxanduva lokuphosa kwaye babakholise ngokwazi kwabo kunye neempawu zabo. Iinkqubo zeTV kwifomathi yokuphosa ithandwa kakhulu. Nokuba ufuna i-superstar okanye imodeli ephezulu elandelayo, umbukeli uyonwatyiswa ngeyona ndlela ifanelekileyo kwaye into ebangela iintloni isisiqinisekiso esifanelekileyo sokufumana amanqaku aphezulu kumdlalo wokuphosa kwizikhululo zikamabonwakude.
Kodwa singaphupha nangokuphosa. Mhlawumbi ukhe walapho ngokwakho okanye wabona abanye abantu baphicothwa ngendima ethile okanye ukunikela. Kodwa, kunokuthetha ntoni ukusuka kwindawo yokujonga iitoliki zamaphupha ukuphupha olu phawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha «Ukuphosa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «Ukuphosa» - ukutolikwa kwengqondo
Uphawu lwephupha «Ukuphosa» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba uzibona uphosa ngaphakathi el mundo Ukusuka kumaphupha, kubomi bokwenyani malunga nokuzingqinela ngokwakho. Uqinisekile ngamakhono akho, kodwa awufumani kuqonda ocinga ukuba ukufanele.
Cinga ngendlela oziveze ngayo xa bephosa. Eyona nto iphambili apha yimvakalelo hayi umxholo wokuphosa. Nangona kunjalo, oku kunokusetyenziselwa ukongeza kuhlalutyo lwamaphupha, umzekelo ukucula okanye ukudanisa ngeesimboli.
Ngaba uzive ukhuselekile xa uphicothwa? Okanye ngaba ubusoyika uvavanyo lwejaji phambi kwakho? Unele Ukuzithemba - okanye hayi? Kutheni le nto ucinga ukuba unento yokuzingqina? Ngaba ayonelanga ukuba uyazi ukuba yintoni onokuyenza ngokwakho?
Ukuphosa kunokuba ngumqondiso wephupha kwixa elizayo impumelelo yalatha kwicandelo lobungcali. Mhlawumbi amaphupha anokufezekiswa apha, awayehlala elindelwe ngasese kodwa engakholelwa. Ukuphosa kunokuba yinto enye Ukhuphiswano inkxaso ekufuneka eyenzile ngokwenyani. Ngokukodwa xa uzibona uphosa nabanye abakhuphisana nabo, kuya kufuneka usebenze kubomi bokwenyani ukuze uqiniseke ngobuchule kunye nokunyaniseka.
Uphawu lwephupha «Ukuphosa» - ukutolikwa kwengqondo
Ukulahla kubonisa ukuphupha njengophawu lwephupha lokugcwala kwakho. Kleyima Ubeka amabango amaninzi kuye kwaye ufuna ukugqwesa ngokusebenza ngokugqwesileyo kuzo zonke iindawo. Ukuphupha akonelisekanga ngumsebenzi ophakathi. Nangona kunjalo, kukho ingozi yokumisela imigangatho ephezulu kakhulu ngelinye ixesha kangangokuba awunakufikelela kuyo ngokwakho. Oku kukhokelela kwimvakalelo yoxinzelelo olusisigxina, oluhlala luhamba noloyiko lokusilela.
Kwinguqulelo yengqondo yamaphupha, ukuphosa kunokubandakanya umnqweno wokuqwalaselwa kunye nokunconywa.
Ukusuka kwindawo yokomoya yokujonga ukutolika kwamaphupha, umfanekiso wephupha elithi «Casting» kuthetha ukulwela iinjongo eziphezulu kunye nokufumanisa ezintsha amandla engqondo.